Android လုလင်: September 2012
ဒါလေးကလည်း you tube ကဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းတဲ့ appလေးပါ
ဆော့ဝဲလေးကို ဖွင့်လိုက်(အဲ ကွန်နက်ချင်ရှိရမယ်နော်)
လိုချင်တဲ့ သီချင်းပေါ်ကို လက်နဲ့ဖိလိုက်ရင် play လား download လားမေးမယ်နော်
Download TubeX /EasyTube
ရေးတဲ့အချိန် 3:43 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Easy Tether PC software လေးပါ..........
android ဖုန်းက အင်တာနက်ကို pc မှာသုံးမယ်ဆိုရင် Tethering ဆော့ဝဲဖွင့်ပြီး hospot လုပ်ရပါတယ်။
တချို့ဖုန်းတွေက Tethering မပါတဲ့အတွက် လိုရင် သုံးလို့ရအောင် လုလင်ပျို ရှာတွေ့တာလေး တင်လိုက်ပါတယ်။
Andriod phone နဲ့ PC နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ.။အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
ပထမဆုံးဖုန်းထဲသို့ Apk file ဖြစ်တဲ့ Easy Tether apk လေးကိုထည့်ကမှာပါ.။ ဒီဖိုင်လေးကိုဒီမှာဒေါင်းလိုက်နော်
ဒေါင်းပြီးရင်အဲ့ဖိုင်လေးကိုဖုန်းထဲထည့်လိုက်ပါ..။ပြီးရင် install လုပ်လိုက်ပါ။ သတိ ( Unknown sources ကို အမှန်လေးပေးထားနော်)
setting ပိုင်းက version 2.3 တွေ့ က application ထဲမှာ၇ှာကြည့်ပါအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။
4.0 တွေ့ အတွက်ကတော့ Security ထဲမှာ၇ှာကြည့်ပါ။
ပြီးရင် USB debugging ကိုလဲအမှန်ချစ်ထားဖို့လို့တယ်နော်PC နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ.... version 2.3 တွေ့ ကapplication ထဲမှာပဲ..
အောက်မှာရှိတယ်။Development ထဲမှာ USB debugging တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။အမှန်လေးချစ်လိုက်နော် PC နဲ့မချိတ်ဆက်မှီ။
ပြီးသွားရင် PC အတွက်တခုထည့်မယ်။ အဲ့ဒါကိုလဲဒေါင်းလိုက်ပါဦးနော်
ဒေါင်းလိုက်နော်..အဆင်မပြေရင် commend မှာပြောပါနော်...
exe file ပါ PC မှာinstall လုပ်လိုက်ဦးနော်.....ပြီးမြောက်သွားရင်အနက်ရောင်လေးဖုန်းပုံစံလေးတွေ့ မယ်။
အာလုံးပီးမြောက်သွားပြီးရင်...ဖုန်းရဲ့ USB နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ပြီးဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ Easy Tether ထဲဝင်လိုက်ပါ။yes, it run now ဆိုတာရွေးချယ်ပေးပါ။ပြီးရင်မိမိကွန်ပျူတာက window ဖြစ်တဲ့အလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါ။ပြီးသွားရင် next နဲ့သွားပါ။ပြီးသွားရင် Easy Tether ဆိုပြီးအောက်မှာ USB ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အမှန်ချစ်လိုက်ပါ။ပြီးသွားရင်ဖုန်းရဲ့အစဆုံးက data switch ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ show hidden icon က Easy Tether လေးဆီသွားပီး right click နှိပ်လိုက်ပါ။ Exit နဲ့ Setting နဲ့ စာဖတ်သူရဲ့..ဖုန်းရဲ့connect andriod ap ဆိုတာတွေ့ မယ် connect an ap ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။....စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီး....ဒါဆို။
အဆင်မပြေတာလေးများ၇ှိလဲ commend နဲ့မေးမြန်းပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 2:08 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းပွား သုံးချင်သူများ နှင့် အပွား မခံ ချင်သူများ အတွက် သတင်းကောင်းလေး ပါ
CDMA ဖုန်းကဒ် ပွားချင်သူများ နဲ့ ပွားခံရခြင်းမှကာကွယ်ရန်
Nokia 6308 cdma (450 and 800 mhz )
စမ်းသပ် ပြီး ပါပြီ ။ဖုန်း ရဲ့ မူရင်း software မှာ ပဲရပါတယ် ။software ပြန်ရေးပြီး ရင်သုံးလို့ မရတော့ပါဘူး ။
ဖုန်းကဒ် ထည့်ပြီး ဖုန်းခေါ် လိုက်ပါ။ပြီးရင် ဓာတ်ခဲ ကိုနည်းနည်း ဟ ပြီး ဖုန်းကဒ် ကို ပြန်ထုတ်လိုက် ပါ က ရပါပြီ ။ ဖုန်းမပိတ်မခြင်း သုံးရပါပြီ။
ဆိုင်တွင်ဖုန်းအပ်ပါက ဖုန်းကဒ်ပြန် ယူပါရန် နှင့် မည်သူ့ ကို မှ မငှားပေးပါနှင့် ။
၎င်းဖုန်းပွားနိုင်သော ဟန်းဆက်များမှာ Nokia 6308 (CDMA 450 and 800 mhz ) အဆိုပါ ဟန်းဆက်ဖြင့် ဖုန်းပွားခံထားရသူများ အနေဖြင့်
မိမိ၏ မူရင်း ဖုန်း မှအထွက်ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နေစဉ်အချိန်တွင် ပွားထားသော ဖုန်းမှလည်း အထွက်ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ပါက
မူရင်း ဖုန်း၏ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုမှာ ချက်ခြင်းပြုတ်ကျ ရပ်ဆိုင်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး ဖုန်းကို ဘက်ထရီ
မဖြုတ်မချင်း (သို့မဟုတ်) ပါဝါ မပိတ်မချင်း ပွားထားသော နံပါတ်ကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပိုင်ရှင်မသိအောင်အလွယ်တကူ ဖုန်းပွားနိုင်သော စီဒီအမ်အေ ဟန်းဆက်ဈေးကွက်သို့ ၀င်လာတာ၁နှစ်ကျော် ပါပြီ ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖုန်းအသုံးပြုသူများ သ တိ ထား ကြပါ ။
လက် ဆင့် ကမ်း ပေး ကြ ပါ….
ငါးသိန်းတန် စီဒီအမ်အေ တီလီဖုန်းများအား ဖုန်းပွား၍ သုံးစွဲနိုင်သော Nokia 6308 (450 and 800mhz )ဟန်းဆက်များ ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်လာနေပါတယ်။
ယင်းဖုန်းများကို အသုံးပြုနေသူများ အနေဖြင့် မိမိဖုန်းများကို သတိပြုကိုင်
တွယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း Mobile House (sale and services ) မှသတိပေးအပ်ပါသည်။
"အခု မြန်မာနိုင်ငံ ဖုန်းဈေးကွက်ထဲကို စီဒီအမ်အေ ကွန်ယက်မှာ ပွားသုံးလို့ ရနိုင်တဲ့ ဟန်းဆက်
၀င်ရောက်လာပါတယ်။ ငါးသိန်းတန် စီဒီအမ်အေ ကွန်ယက်သုံး ဘယ်နံပါတ်ကို မဆို အလွယ်တကူ
ကိုယ်တိုင် ပွားသုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ်.. သူပွားပုံ နည်းစနစ်ကလည်း မူရင်း ဖုန်းပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် အပွား
ခံထားရမှန်း မသိရလောက်အောင်ကို မျက်စိလည်ရတဲ့ စနစ်မျိုးပါ။ ဖုန်းဖန်ရှင် အတော်များများကို
နားလည်ပြီး အသုံးပြုနေသူတွေတောင် မရိပ်မိ၊ မသိရှိနိုင်လောက်အောင် ဒီဖုန်းစနစ်က ကောင်းပါတယ်။
ဖုန်းပွားနိုင်ဖို့ အတွက် မူရင်းကတ်ကို တစ်မိနစ်လောက် ရတာနဲ့ အလုပ်ဖြစ်သွားပါတယ် "ဟု
Mobile House မှ ကျွမ်းကျင်သူကပြောသည်။
ထို့ကြောင့် 0949—–၊0947….၊09910….၊ 0973——၊GSM ကလွဲပြီး စီဒီအမ်အေ ကွန်ယက်အမျိုးအစား ကို အသုံးပြုနေသူများ
အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဖုန်းကတ်ကို အခြားသူအား ငှားရမ်းခြင်း၊ အလွယ်တကူ ထားခြင်း၊ ဂရုတစိုက် အသုံးပြုခြင်း၊
မိမိ အသုံးပြုမှု နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ (ဖုန်းဘေလ်)ကျသင့်မှုတို့အား မပြတ်ကြည့်ထားခြင်း စသည်တို့အား
သတိပြုထားရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်ပို
Ref: ITN Site မှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေးတဲ့အချိန် 1:54 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Nokia ဖုန်းအတွက်လည်း Viber သုံးလို့ရပါပြီ
အခု Nokia ဖုန်းအတွက်လည်း Viber သုံးလို့ရပါပြီ
တင်ပေးထားတဲ့ဆိုဒ်မှာလည်း ယူနိုင်သလို https://www.box.com/(or)www.mediafire.com/
မှုရင်းဆိုဒ်မှာလည်း ဒေါင်းလို့ရပါတယ် http://www.viberfornokia.com/
ရေးတဲ့အချိန် 1:52 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Special Electro Ringtones for iPhone/Android
MMAS ချစ်သူများအတွက် အလန်းစား Electro Ringtone များကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Android ဖုန်းများအတွက် .mp3 အနေနဲ့တင်ပေးထားသလို iPhone များအတွက်လဲ .m4r ဖိုင်အဖြစ်တင်ပေးထားပါတယ်။ခုတစ်လောနာမည်ကြီးနေတဲ့ Oppa Gannam Style, Party Rock အပါအ၀င် Ringtone အပုဒ်ပေါင်း ၂၁ ပုဒ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ဖိုင်ဆိုဒ် 10.33 MB ရှိပါတယ်။iPhone အတွက်ကတော့ 10.1 MB သာရှိပါတယ်။
Download Electro Ringtones for iPhone. (Dropbox Link)
Download Electro Ringtones for Android. (Dropbox Link)
Download Electro Ringtones for iPhone. (Box Link)
Download Electro Ringtones for Android. (Box Link)
ရေးတဲ့အချိန် 1:50 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
samsung ဖုန်းတွေမှာတော့ ပါပြီးသားပဲဗျ
မပါတဲ့ဖုန်းတွေ အတွက် သုံးးလို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်တာ
ဒါလေးသုံးထားတော့ Power ချိန်ချင်ရင် တစ်ဆင့်ခြင်းသွားနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့
Free Power Widget offers some very nice and useful toggles.
The full version hasa1x1 widget as well and the option to disable tactile feedback.
If you like Power Widget please purchase the full version of it.
Note: If you purchase the full version of Power Widget, please uninstall the free version afterwards to get rid of the notification messages.
ရေးတဲ့အချိန် 2:58 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
1)You need to install Adobe® Flash® Player Plugin before using this player.Make sure this Plugin is compatible with your Device. https://market.android.com/details?id=com.adobe.flashplayer2)This free app is ad supported and may contain ads in the notification tray.
Select Sample.swf file and press Menu to Open Flash Files From Your SD Card.
Here It is Cog Soul presenting the best Flash SWF files player / Browser for our respected users.
ရေးတဲ့အချိန် 2:37 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
android ပေါ်မှ sms နှင့် miss call များကို gmail သို့forward ပြုလုပ်ခြင်း
sms နှင့် miss call များကို gmail သို့forward ပြုလုပ်နိုင်မဲ့နည်းလေးပါ။
ဒီနည်းလေးကို လုပ်ထားရင် ဖုန်းကိုယူသွားလို့မရနိုင်တဲ့နေရာတွေ
အဲသလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အရေးကြီးတဲ့ sms နှင့် miss callတွေကို
gmail သို့forward ပြုလုပ်ထားရင် ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေပါစေ
(1)android market မှ sms2gmail.apkကို ဒေါင်းပြီး ဖုန်းထဲမှာ installလုပ်ရပါမယ်
(2)install လုပ်ပြီးရင်တော့ gmail address ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဖုန်းထဲမှာ အသုံးပြုထားတဲ့
gmail လိပ်စာနဲ့ ပတ်ဝေါ့ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
(3) ပြီးရင် activation keyword ဆိုတဲ့ option ကိုနိုပ်ပြီး activation code တစ်ခု ထည့်ရပါမယ်။
activation code ထည့်တဲ့အခါမှာမှတ်မိလွယ်တဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပါ။
gmail က deactivate မလုပ်မခြင်း အရေးကြီးတဲ့ sms နှင့် miss call များကို gmail သို့forward ပြုလုပ်ပေးနေမှာပါ ။
လုလင်ပျို မှာ လိုင်းမကောင်းလို့ ဆော့ဝဲကို တိုက်ရိုက်လင့် မထည့်ပေးမိလိုက်တာပါ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်က ဖုန်းမှာ gmail မသုံးတဲ့ အတွက် ပါ။
Download and use it now: SMS2Gmail 2.3 free download
ဒီလင့်နဲ့အဆင်မပြေခဲ့ရင် googleplay မှာ sms2gmail.apk ဆိုပြီးရှာ လို့ရပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 2:28 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ကျွန်တော် U8818 နဲ့ C8812 ROOT လုပ်နည်း အတူတူပဲမလို့ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အောက်မှာ Download ချသွားလိုက်ပါ။
MyanDroid Soft Keyboard.apk
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ မိမိစက်မှာ မိမိဖုန်း Driver တင်ထားပါ။ ပြီးလျှင် USB Debugging ကို Enable လုပ်ဖို့အတွက် ဖုန်းရဲ့ Setting > Development > USB Debugging ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် မိမိဖုန်းကို Power ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Volume Down + Power ကို ဖိထားပေးပါ။ ဒါဆို Logo မှာပဲ ရပ်နေပါမယ်။ ခဏထားထားလိုက်ပါ။
Super Click.rar ကို Extra Here လုပ်လိုက်ပါ။ အထဲမှာ Super Root ဆိုတဲ့ Folder ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဲထဲမှာ install-superrecovery-windows.bat ဖိုင်လေးကို Run လိုက်ပါ။
ခုနက Logo တက်နေတဲ့အတိုင်း USB ကြိုးဖြင့် မိမိဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်လိုက်ပါ။
ချိတ်ပြီးလျှင် ခုနက .bat File ကသူ့ကသူ လုပ်နေပါမယ်။ မလုပ်လျှင် Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
ခုနက အလုပ်လုပ်နေတာ ရပ်သွားရင်တော့ ကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Battery ကိုဖြူတ်ပြီး ပြန်တပ်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် Volume Up+ Power ကို ဖိထားလိုက်ပါ။ Android Logo လေးတက်လာပါမယ်။ ပြီးလျှင် Recovery Mode ထပ်တက်လာပါမယ်။
Volume down+up ကိုအသုံးပြုပြီးReboot System Now ကို Power Button နှိပ်ကာ ရွေးပေးလိုက်ပါ။ Reboot ကျသွားပါမည်။
ပြန်တက်လာပြီဆိုလျှင် မိမိဖုန်းရဲ့ Application List ထဲမှာ Superuser ဆိုတဲ့ Icon လေးရှိနေပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Root လုပ်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ။
Myanmar Font သွင်းခြင်း
မြန်မာဖောင့်သွင်းဖို့အတွက် Myanmar Mobile Application Store ရဲ့ Product ဖြစ်တဲ့ Font Changer ကို အသုံးပြုသွားမှာပါ။ Font Changer.apk နဲ့ MyanDroid Soft Keyboard.apk ကို မိမိဖုန်းရဲ့ SD Card ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် နှစ်ခုလုံးကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ Font Changer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Superuser Requested ! လို့မေးလျှင် Grant ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဇော်ဂျီဖောင့်ပြောင်းရန် ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သူ့ကသူ Reboot လုပ်နေပါမယ်။ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာလျှင် မြန်မာလို မြင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရိုက်ဖို့အတွက် ဖုန်းရဲ့ Setting > Language & Keyboard > ထဲမှာ MyanDroid Soft Keyboard ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
ရမရ စမ်းချင်လျှင် Notepad ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ စာရိုက်မယ့်နေရာမှာ ခပ်ကြာကြာလေး ဖိလိုက်ပါ။ Input Method ပေါ်လာပါမယ်။ အဲမှာ MyanDroid Soft Keyboard ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် စာရိုက်ကြည့်ပါ။ မြန်မာလို မြင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 4:41 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းစ၀ယ်ပြီဆိုရင် မိမိဖုန်းမှာ အင်တာနက်လိုင်း လျှောက်ထားရင် ဆိုင်က 3G Internet Setting ကို တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားတာ များပါတယ်။ ခုကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ထည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းလျှောက်ထားပြီး သုံးလို့မရတာက မိမိဖုန်းမှာ APN မှန်အောင် မထည့်ထားလို့ပါ။ တော်တော်များများကလဲ အဆင်မပြေကြပါဘူး ဒါကြောင့်အောက်မှာ APN ထည့်နည်း ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး မိမိဖုန်းရဲ့ Setting >More>Mobile Network>Access Point Names
Access Point Name ရောက်ရင် Menu (မျဉ်း၃ထပ်ပုံ) ကို နှိပ်ပြီး Reset to default ဆိုတာနှိပ်ပါ။ ခဏစောင့် ပြီး CTWAP ကိုနှိပ်ပါ Edit access point အောက်မှာ
Name – CTWAP
APN – ctwap
Username – ctwap@c800.mm
Password – *** ( ပေါ်တဲ့အတိုင်းထားလိုက်ပါ။ မပြင်ပါနဲ့ )
MMSC ကနေ MNC အထိက မှိန်နေပါမယ်။
APN enable/disable ဆိုတဲ့အကွက်က enable ဆိုပြီး မှိန်နေပါမယ်။
Data bearer – Package data ( နှိပ်ကြည့်ပါ Package data ဆိုတဲ့ဘေးမှာ စိမ်းနေအောင် select မလုပ်ထားရင် လုပ်ပေးပါ)
ပြီးရင် menu ကို နှိပ်ပြီး Save လုပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ APN ကိုရွေး၊ data enable ပေးပါ။
အပေါ်ကအတိုင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ Setting >More>Mobile Network>Access Point Names> ntwap ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ name နေရာမှာ WAP WAP ၊ APN မှာ #777၊ user name မှာ mptnet@c800.mm ၊ password က ကိုကြိုက်တာပေးပါ၊ Authentication type- PAP or CHAP ပေးပြီး SAVE လိုက်ပါ
ရေးတဲ့အချိန် 4:36 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android appနဲ့ game ကို Pc ပေါ်မှာ သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက်YouWave for
အသုံးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ Patch ဖိုင်သက်သက်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်
Patch Download>>>minus (or)box
မှုရင်းဆိုဒ်ကနေဒေါင်းချင်သူတွေအတွက် http://youwave.com/ မှာဒေါင်းပြီးတော့
အပြင်က Android Applicaton & Games ကိုရော ဘယ်လိုသုံးမှာလည်း
ကျွန်တော် စက်ထဲက Android Applicaton အဲဒါကို ကလစ်နှစ်ချက်နိုပ်ပြီးတော့ Install လုပ်ယုံပါဘဲ
Android Applicaton နံဘေးဘောက်ထဲကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုရင်
ပုံထဲကအတိုင်း File>>>Patch to apps ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ
ပုံထဲကအတိုင်းတွေ့ရမယ်ခင်ဗျာ Android Applicaton ထားတဲ့ ဖိုင်ကို ပုံမှပြထားအတိုင်း ရွှေးပြီး Open ကိုကလစ်လိုက်ပါ
(ကျွန်တော်က မန်မိုကတ်ကိုရွှေးထားပါတယ်) ကလစ်လိုက်ရင် အပေါ်ဆုံးက ပုံအတိုင်း Android Applicaton တွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲဒါဆိုရင် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Android Applicaton ထည့်သွင်းပြီးတော့ အသုံပြုနိုင်ပါပြီ
အဲဒါဆိုရင် နားလည်လောက်ပီထင်ပါတယ် youwave ရဲ့ အားနည်းချက်တော့ Game တွေထည့်ပြီးကစားရတာအဆင်မပြေပါဘူး
http://bluestacks.com/ ကတော့ Game တွေ ကစားရတာ အဆင်ပြေပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်
Applicaton တွေဘဲ ထည့်ပြီးတော့ အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပါတယ် အောက်မှာ နမှုနာပုံတွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်
Applicaton ကို Install လုပ်ပြီးတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုထားတဲ့ ပုံတွေပါ
ရေးတဲ့အချိန် 3:29 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့avast security antivirus လေးရှိဖို့လိုတယ်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ..ကိုဟာ..ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ avast antivirus လေးကိုဒေါင်းပြီးထည့်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်..ဖုန်းကအင်တာနက်နဲ့ ထိတွေ့နေတာဆိုတော့အင်တာနက်မှာပြန်လွင့်နေတဲ့virusတွေအချိန်မတေရွးဝင်ရောက် နိုင်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့..အဲ့ဒိတော့ဖုန်းနဲ့သုံးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိရင်ကိုဖုန်းမှာဘာမှ မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ကာကွယ်ထားကြရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် ပြီးတော့ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကfreeရပါတယ် အဆင်ပြေမှာပါ...လိုအပ်မယ်ထင်ရင်တော့ဒီမှာသွားဒေါင်းလိုက်ပါ
ရေးတဲ့အချိန် 5:11 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android သမားတွေ လက်ဖျားက Zapya apk
Android သမားတွေက အရင်က ဖိုင်တွေ apk တွေကို Bluetooth နဲ့ Share ကျတယ်။ ဒါတောင် apk Share တဲ့နေရာမှာ သိပ်မလွယ်ဘူး။ Backup လုပ်ပြီးမှ ပြန် Share ကြရတယ်။ ခု ဒီ apk လေး ပေါ်လာတော့ အားလုံးအလွယ်တကူပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ သူ့ အလုပ်လုပ်ပုံက Bluetooth နဲ့ဆင်ပေမယ့် Bluetooth Network နဲ့ သွားတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူက Wifi network နဲ့ သွားတာပါ။ အဲ့တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပို့ကြပြီဆိုရင် တစ်ယောက်က WiFi ထောင်ထားတယ် နောက်တစ်ယောက်က ဖမ်းသုံးမယ်ပေါ့။ Tethering wifi hotspotမရတဲ့ ဖုန်းတွေ ဆိုရင်တော့ ထောင်လို့မရဘူးပေါ့။ ခု Zapya.apk လေးကို အရင်ဆုံးဒေါင်းလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်မယ်။ zapya ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်း အမည်တွေဘာတွေထဲ့ ဓါတ်ပုံပါ ထဲ့ချင်သပဆိုလည်း ပုံပါထဲ့ထားလိုက်ပါ။
ပုံမှာပြထားသလိုလေး connect to friend ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ထောင်မယ့်လူဆိုရင် နံပါတ်(၁)Create Network
ယူသုံးမယ့်သူဆိုရင် နံပါတ်(၂) Search Network ပါ။
တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်မိပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ apk .movies,photos တွေကို ခုလိုပဲ ဆွဲထဲ့လိုက်ပါတော့။
လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ပြီးလို့ပြန်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ Menu Key ကိုနှိပ်ပြီး exit ဆိုတာလေးတော့ ရွေးပြီးထွက်ပါ။
ခုဆိုရင် သင့်ဖုန်းကို Samsung Galaxy S3 ရဲ့ Functionလေးတစ်ခုလို သုံးတတ်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 3:13 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်းများကို Computer မှ ထိန်းချုပ်ခြင်း (91 PC suite)
91 PC suite ကနေပြီး ... Android Phone တွေရဲ့Application တွေ ... Msg တွေ .. Contact တွေ Media File တွေကို Control လုပ်လို့ ရပါတယ် ...
သူ့ ကို မသုံးခင်တော့ Phone ရဲ့ USB Driver ကို အရင်သွင်းထားရမှာပါ .. Internet Connection ရတဲ့ စက်မှာ ဆိုရင်တော့ Error မတက်ပေမဲ့ Internet မရတဲ့စက်တွေမှာ နောက်တစ်ကြိမ်ဖွင့်ရင် reinstall လုပ်ပေးရပါတယ် .. စစသွင်းချင်းမှာ English Font ပေါ်မှာမဟုတ်တာကြောင့် ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်က စက်ရုပ်ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး သုံးခုမြောက်က Down Arrow ကို နှိပ်ပြီး English ကိုရွေးမှ English လို ပေါ်လာမှာပါ ... Application သွင်းတာကတော့ ဘယ်ဘက်ဘားကနေ App ထဲကို ၀င်ပါ .. အပေါ်ဘားက Install App ကိုနှိပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ App ရှိတဲ့နေရာကိုသွားရွေးပါ ... သူ့ ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Multiple သွင်းလို့ ရတာပါပဲ ... ဖုန်းထဲကနေ အချိန်ကုန်ခံပြီး Install တောက်လျှောက်လုပ်စရာ မလိုတော့ပဲ Tasklist ထဲက que ထဲကို ၀င်သွားပြီး အားလုံးသွင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ် ...
Down load 91 PC suite
ရေးတဲ့အချိန် 2:46 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Gmail Account ကို Android ဖုန်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဖွင့်နည်း
Create gmail account easily
Website ပေါ်ကနေ Gmail Account ဖွင့်လို့မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မိမိရဲ့ Android ဖုန်းပေါ်ကနေ Gmail Account အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရပါပြီ။Android ဖုန်းကိုသုံးပါ။Android က google ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် OS ဖြစ်လို့
gmail service ကိုလည်းအလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
(1) Android ဖုန်းမှာ setting ကိုသွားပါ ။
(2) Account and sync ကိုသွားပါ။
(3)add an account ကိုနှိပ်ပါ။
(4)Google ကိုရွေးပါ။ ( ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ gmail application သွင်းပြီးသားရှိမှသာ google ဆိုတာပေါ်
နေမှာ။Android ဖုန်းတွေက gmail app အစကတည်းကပါလာပေမယ့် တစ်ချို့ တရုတ်ဖုန်းတွေနဲ့ custom roms
ဒါဆို gmail.apk နဲ့ GoogleServiceFrameworks.apk ဖိုင်တွေကို Google မှာအလွယ်တကူရှာဖွေပြီး download
လုပ်ပါ။ ,rootexplorer ကိုသုံးပြီး အဲ့ဒီ့ ဖိုင်၂ဖိုင်ကို system folderအောက်က app folder ထဲကိုကူးထည့်ပါ။Install လုပ်ပါ။ဖုန်းကို restart ချပါ။Gmail app ကိုသုံးလို့ရပါပြီ။ )
(5)ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ နာမည်နဲ့ account name ကိုပေးပါ။ကိုယ်လိုချင်တဲ့နာမည်မရင် နောက်နာမည်အသစ်ရွေးပေါ့။ရခဲ့ရင် Next နှိပ်။
(6)ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ passwordကို ၂ခါဖြည့်ပါ။ပေးလိုက်တဲ့ passwordကိုသေချာမှတ်ထားပါ။မေ့သွားရင်ပြန်ယူ
(7)Security Question က answer ကို ကိုယ်မှတ်မိမယ့်ဟာပေးပါ။password မေ့သွားလို့ gmail account ဝင်မရ
တော့ရင် ဒီ security question ကိုသုံးပြီးပြန်ယူရမှာပါ။
(8) human check အတွက် ပြထားတဲ့ စာလုံးတွေကို မှန်အောင်ဖြည့်ပေးပါ။
(9) I agree,next ကိုနှိပ်ပါ။
(10) Finish နှိပ်ပါ။
(11) Finish setup ကိုနှိပ်ပါ။
အကောင့်အသစ်ကိုစသုံးလို့ရသွားပါပြီ။လိုအပ်ရင်ဆန္ဒရှိသလောက် ဒီအတိုင်း gmail account ပေါင်းများစွာကို ဆက်ကာဆက်ကာ ကြိုက်သလောက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ android ဖုန်းမရှိရင်တော့ ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို ဖွင့်ခိုင်းပေါ့။ဖုန်းမှာအင်တာနက်
ရေးတဲ့အချိန် 3:33 PM 1 comment: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
upload တင်တဲ့ Box ဆိုဒ်မှာဖုန်းကနေ 50GB ထိရအောင်ယူမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဖိုင်တွေကို upload တင်ပေးနေတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ free account ဆိုရင် 2GB အချို့ဆိုဒ်တွေက 5GB လောက်ပဲပေးပါတယ်။ဒါတောင်ကိုယ်တင်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်တာကရှိသေးတယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုဒ်ကတော့ www.box.com ပါဘဲ။ အများသိနေတဲ့ dropbox လိုဆိုဒ်မျိုးပါဘဲ။ဖရီးအကောင့်ဆိုရင် 5GB ပေးပါတယ်။ upload တင်တာရော။ တင်ပြီးသားကို download ဆွဲတာရော တော်တော်အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖိုရမ်ထဲက အသင်းသားတွေ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးတွေကို အခြားသူများကို မျှဝေနိုင်အောင် အဆင်ပြေဆုံးတင်ပေးနိုင်အောင်လို့ပါ။ Andriod phone နဲ့အကောင့်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဒီ box apk ဖိုင်လေးကို အရင်ဒေါင်းပါ။
အဲဒါကို ဖုန်းထဲထည့်ပြီး install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါ။ 5GB free ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ အောက်ကလင့်လေးကို ထပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါ။
အဲဒါလေးကို ဖုန်းထဲမှာထပ် install လုပ်ပြီး ခုနက box.com မှာလုပ်ထားတဲ့ အကောင့်မှာ ပေးထားတဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Get လုပ်လိုက်ရင်
50 GB ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုတင်ပေးထားတာလဲ 50GB ရထားတဲ့ box အကောင့် ကနေပဲတင်ပေးထားပါ။
ရေးတဲ့အချိန် 11:35 AM5comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android Phone အတွက် Bluetooth Chat
ချက်ဝါသနာအိုးများအတွက် Bluetooth Chat လေးပါ။ အသုံးချတတ်ရင် အသုံးချတတ်သလို အသုံးတည့်တယ်။ အသေးစိတ်တော့ မရေးတော့ဘူးဗျာ။ ချက်အိုးတွေ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဘာတွေကောင်းသလဲ ဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲ မေးရင် ကောင်းမှကောင်း။ အကုန်ကောင်း။ သူ့ထက် ကောင်းတာတောင် သူ့လောက် မကောင်းဘူး :P
BluetoothChat - Bluetooth Chat
ရေးတဲ့အချိန် 5:36 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်းတွေအတွက် SMS Design အလန်းလေးပါ
Android ချစ်သူတွေအတွက် Go SMS လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ iPhone Style Theme အပြင် တစ်ခြား Theme တွေအများကြီးပါ ပါတယ်။ SMS တစ်ခုချင်းစီကိုလဲ Encrypt လုပ်ပြီး Password နဲ့ ခံထားလို့ ရပါတယ်။ SMS တွေအားလုံးအတွက် Backup/Restore function ပါဝင်ပြီး Schduled Messages လဲပါဝင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 5:18 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Android ဖုန်းမှာ အင်တာနက်သုံးတဲ့ အခါ applications တွေမှာ ကြော်ငြာတွေ မြင်နေရလို စိတ်ညစ်နေသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကို သုံးနိူင်ဖို့ အတွက် Root လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။မိမိစက်နဲ့ အမြဲတမ်းအင်တာနက်သုံးပြီး ၀က်ဆိုဒ်တွေ ဖွင့်တတ်တဲ့ သူများအတွက်တော့ အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ဒီကောင်လေးသုံးပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပိုမိုပေါ့ပါးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 1.4M လောက်ရှိပြီး ဗားရှင်း ၂.၁နဲ့အထက်အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 4:57 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အကြောင်းအရာ lock ဆော့ဝဲ
Galaxy Nexus ringtones packAndroid
Galaxy Nexus ringtones pack လေးပါ အခြား Android phones တွေမှာလဲ install လုပ်နိုင်ပါတယ်
Download Galaxy Nexus Ringtones (Full pack)
ရေးတဲ့အချိန် 4:48 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းပွား သုံးချင်သူများ နှင့် အပွား မခံ ချင်သူမျာ...
android ပေါ်မှ sms နှင့် miss call များကို gmail သု...
Huawei C8812+U8818 ကို ROOT လုပ်မယ်။ Myanmar Font ...
Android appနဲ့ game ကို Pc ပေါ်မှာ သုံးချင်တဲ့ သူတေ...
ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့avast security ...
Android ဖုန်းများကို Computer မှ ထိန်းချုပ်ခြင်း (...
Gmail Account ကို Android ဖုန်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူဖွင်...
upload တင်တဲ့ Box ဆိုဒ်မှာဖုန်းကနေ 50GB ထိရအောင်ယူ...
DOWNLOAD An Android Guide : These Are The Droids Y...
Applications များကို Android Phone & Tablet ဖုံးထဲ...
android မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် effect အလန်းလေးတွေနဲ့ရ...
Firefox 15.0.1 apk Android
Video Player / Movie Player 1.4.1
volume အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာချိန်ညှိမယ်
3D Piano Ringtone 1.9
Music Player for Pad/Phone 1.3.7
GoneMAD Music Player (Trial) 1.3.8
Ornagai English-Myanmar mobile Dictionary For Andr...
Android ဖုန်းတွေကနေ wifi ပြန်လွှင့်ဖို့ Barnacle Wi...
Android ဖုန်း အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို။
Android ဖုန်းထဲကနေ application တွေကို အင်တာနက်ကနေ ...
Sony Ericson မှာ မြန်မာဖောင့်ထဲ့မယ်ဗျို့
How to Root LG Optimus Black P970
Nokia ဖုန်းတွေ မှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ မြန်မာလိုပေါ်အော...
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Mozilla FireFox Browser သုံးချ...
HDR Camera Apk v2.23
MP3 Music Direct Download Apk v1.0
Easy MP3 Downloader Pro Apk v1.10
THE KING OF FIGHTERS Android Apk v12.07.01
Root App Delete (uninstaller) v6.2.3
Satellite Director NG v22(2 2) Android Apk App
PES 2012 Pro Evolution Soccer v1.0.5 FULL Android
Android User များအတွက် Window 8 လာပြီ
ဖုန်းမှာ ဘာသာစကားတစ်ခုကို ပြန်ပြီးဘာသာပြန်ပြောပေးတ...
ဒီတစ်ခါ Piano တီးရအောင်
Multiple Wallpaper 1.4.7
TubeMate YouTube Downloader 1.04.05
Download youtube Videos 1.0
ES File Explorer v1.6 For Android
Real Player v0.0.0.61 For Android
အပျင်းအပြေ ခွေး လေးနဲ့စကားပြောရအောင်
Talking Tom & Ben News 1.0
ဖုန်းဒီဇိုင်းကို လန်းလန်းလေးသုံးချင်သူများအတွက် Hi...
Screen ပေါ်က Power ခလုပ်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ Lock...
Google Gmail 2.3.6 [Android 2.2+]
FUTURE MYANMAR THEME for Android Phone
Android Lost နဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းကို Online ကတဆင့် စိတ်...
Huawei UM840 Firmware
Kindle Fire 6.3.1 ကို ROOT လုပ်ရအောင်၊ Myanmar Fon...
Live Wallpapers Mobile News PC Software H...
Talking Rapper v2.0.0.1
Power AMP V2.0.5 Build 488 Full Version For Androi...
CallBlocker Pro-v 2.7.4 apk
Bluetooth File Transfer v5.20( Latest Version ) Fo...
Power DVD Mobile v4.0.4789 For Android
U-Cam Ultra Camera v2.0.206 For Tablet/Android
History Eraser PRO v2.5.6 For Android
APP2SD PRO v2.44
Video Call ပြောကြမယ်..သုံးကြည်.နော် Tango
ဖုန်းကို နားမှာ ကပ်လိုက်တာနဲ.Auto ဖုန်းကိုင်ပြီးသာ...
Fast For Facebook -22.apk v1.8